‘नेविसंघ स्ववियुको निर्वाचनमा जान तयार’
सल्यान क्याम्पसको स्ववियु सचिब, जिल्ला अध्यक्ष हुँदै नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रही सकेका विद्यार्थी नेता ऋषिकेशजंग शाह यतिवेला निकै चर्चामा छन् । हाल नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष नैनसिंह महरको राजीनामापछि तदर्थ समितिमार्फत सो पदमा शाहलाई ल्याउने भन्ने विषयले उनी चर्चामा आएका हुन् । प्रस्तुत छ उनीसँग हाम्रोखबरडटकमले गरेका कुराको संक्षेप :
नेविसंघको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
आजभन्दा ४८ वर्ष अगाडी अर्थात् २०२७ सालमा विपीन कोइरालाको अध्यक्षतामा स्थापना भएको नेपाल विद्यार्थी संघ लामो इतिहास बोकेको विद्यार्थीहरुको पहिलो संगठन हो । यो नेपाली कांग्रेसको मूख्य भातृसंस्थाका रुपमा मुलुकमा क्रियाशील छ । यसले विद्यार्थीका हक हित तथा अधिकारका क्षेत्रमा बलिदानपूर्ण संघर्ष गर्दै आएको छ । हाल निवर्तमान संघका अध्यक्षले समयमै आगामी कार्यकालका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेकै कारण राजीमाना दिएको अवस्थामा छ ।
के हाल नेविसंघ नेतृत्वबिहीन छ ?
विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा सशक्त संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ नेतृत्वबिहीन हुन सक्दैन् र छैन । नेविसंघको हालसम्म १८ जना अध्यक्षले नेतृत्व गरिसक्नु भयो । विभिन्न कालखण्डमा उहाँहरुले यस संघलाई अगाडि बढाउँदै आउनु भएको हो । यस ने बि संघ नेतृत्वमा उहाँहरुमध्ये कतिपय महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनु भएको हो भने कतिपयले मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसको नीति एवं संघको विधानबमोजिम नेतृत्वमा आउनु भएको थियो । सोही परिस्थिती अहिले पनि नेविसंघमा छ । जसको विकल्प मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसले दिनेछ । नेविसंघ लामो समयसम्म नेतृत्वबिहीन अवस्थामा रहेको रहन हुदैन । पार्टीले यसमा छिटो निर्णय गर्नेछ भन्ने बिश्वाश छ ।
नेविसंघमा नयाँ नेतृत्व छान्ने विधानमा कस्तो व्यवस्था छ ?
प्रत्येक २ वर्षको अन्तरमा महाधिवेशनमार्फत आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र आबस्यक परे ५ महिना समय थप्न सक्ने नेविसंघको विधानमा व्यवस्था छ । तर, नेविसंघको ११ औं महाधिवेशन भएको २९ महिनासम्म पनि १२ औं महाधिवेशन नभएकाले निवर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महरले गत २८ माघमा राजीनामा दिनु भएको छ । विपीन कोइरालाको अध्यक्षतामा स्थापना भएको नेविसंघमा निवर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महरसम्म आइपुग्दा १८ जनाले नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । अव १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले एक तदर्थ समिति गठन सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । जसको कार्यकाल विधानमा ६ महिना हुने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अव नेविसंघको नेतृत्व केही समयका लागि तदर्थ समितिले गर्नेछ ।
१२ औं महाधिवेशनबाट उम्मेरहद लागू हुने व्यवस्था राखिएको छ नि ?
१२ औं महाधिवेशनदेखि लागू हुने गरी नेविसंघको नेतृत्व लगायत पदाधिकारीमा पुग्नका लागि विधानमा ३२ वर्ष मुनिको उम्मेर हुनुपर्ने उम्मेरहद राखिएको छ । यो उम्मेरहदको कुरा १२ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने पदाधिकारीका लागि लागू हुने भन्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ । यही महाधिवेशनबाट कार्यन्वयनमा आउँछ ।
उम्मेरहद तदर्थ समितिलाई पनि लागू हुन्छ ?
तदर्थ समिति भनेको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि गठन गर्ने प्रचलन रहेकोले यसमा ३२ वर्षे उम्मेरहद लाग्दैन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठकले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने भएकाले यसमा उम्मेर हदको कुरा नै आउँदैन । यो उम्मेर हदको कुरा १२ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने पदाधिकारीका लागि लागू हुने भन्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ । महाधिवेशनबाट मात्रै कार्यन्वयनमा आउँछ ।
सो तर्दथ समितिमा तपाईको सम्भावना छ भनिन्छ नि ?
त्यो पार्टीले तय गर्ने विषय हो । पार्टीले जिम्मेवारी दिन्छ भने पार्टीको एक सिपाही भएका नाताले मैले जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु । यो पार्टीले गर्ने मूल्यांकनको विषय हो । पार्टीले समयमै नेसिंघको १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिएर जिम्मेवारी दिएमा म पनि एउटा नेविसंघको लामो इतिहासँग गाँसिएको कार्यकर्ता हुँ । लामो समयदेखि नेविसंघको नेतृत्व पंक्तिमै छु । विगत नेपालगञ्ज महाधिवेशनदेखि त पार्टीले मूल्यांकन गर्ने किसिमको कार्यभार मैले निर्वाह गरिसकेको छु ।
त्यस्तै एक विद्यार्थी नेताका रुपमा रहेर विद्यार्थीका विभिन्न मुद्दामा म जहिल्यै पनि क्रियाशील रहँदै आइनै रहेको छुु । जस्तो विद्यार्थीहरुले जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि देशका सबै क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनाको मूद्दा होस् वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिने प्रणालीको शुरुवात गर्न २०६४ सालमा देशव्यापी भएको आन्दोलनको नेतृत्व मैले नै गरेको हुँ । जसबाट देशमा शैक्षिक वेरोजगार न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अझै नेविसंघलाई डिजिट्लाइजड् संगठनको रुपमा विकास गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ । देशभरका संघका साथीहरुलाई प्रविधिक रुपमा पनि एक ठाउँमा ल्याउने मेरो इच्छा हो ।
तदर्थ समितिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण भएका अभ्यासहरु छन् ?
छ, मैले उल्लेख गरिसकें स्थापनाकालदेखि हालसम्म नेविसंघको नेतृत्व १८ जनाले सम्हालिसक्नु भएको छ । जसमा ११ जनाले महाविधेशनबाट र बाकिले तदर्थ समितिबाटै नेतृत्वमा पुगेको इतिहास नेविसंघको छ । नेविसंघका संस्थापक अध्यक्ष विपिन कोइराला र त्यसपछिका अध्यक्षहरु शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाण, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, विश्वप्रकाश शर्मा, किशोर राठौर, महेन्द्र शर्मा र रञ्जित कर्णले सर्वसम्मत तथा महाधिवेशनबाट अर्को कार्यकालका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै विमलेन्द्र निधि, एनपी साउद, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेलले अर्को कार्यकालका लागि तदर्थ समितिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भएको इतिहास छ । त्यस्तै वर्तमान अवस्थामा पनि नैनसिंह महरले त्यसरी नै तदर्थ समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अर्को कार्यकालका लागि तदर्थ समिति गरिएको नेतृत्व हस्तान्तरणबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, धनराज गुरुङ, किशोरसिंह राठौर, केशव सिंह, महेन्द्र शर्मा र रञ्जित कर्ण नेविसंघको नेतृत्वमा आउनु भएको थियो ।
निर्धारित समयमै ने बि संघको नेतृत्व चयन किन हुन सक्दैन ?
नेविसंघको इतिहासमा कुनै त्यस्तो कालखण्डमा प्राविधिक रुपमा नेतृत्व चयन निर्धारित समयमा नै नभएपनि नेतृत्वविहीनको अवस्थामा रहेको छैन् । केही त्यस्ता कारण छन् जसको समयमा निक्र्यौल हुनुपर्छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
इतिहासमै हालसम्म निर्धारित समयमा महाधिवेशनबाट आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्व चयन एक पटक मात्रै भएको छ । यस्तो नेविसंघको आठौँ महाधिवेशनबाट तत्कालीन अध्यक्षमा चयन हुनुभएको विश्वप्रकाश शर्माले २०५९ मा नवौँ महाधिवेशन गरेर अर्को कार्यकालका अध्यक्ष गुरुराज घिमिरेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
तर, अन्य अध्यक्षहरु कोही अलि ढिला भएको महाधिवेशनबाट आउनु भयो भने कोही सर्वसम्मतबाट नेतृत्वमा आउनु भएको हो । धेरै जना अध्यक्ष तदर्थ समितिबाटै नेतृत्वमा आउनु भएको हो ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कम्जोर भएकै हो त ?
ठ्याक्कै कम्जोर भएको छ भनेर भन्न मिल्दैन। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी निकटका अखिल र अखिल क्रान्तिकारीले मिलेर सत्ताको पृष्ठ पोसन गरिरहेका छन। त्यो अवस्थाले गर्दा केही रुपमा नेपालको अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन कम्जोर भएको छ। एकातिर दुई विद्यार्थी संगठन सत्ता बचाउन लागिरहेका छन भने अर्को तिर नेपाल विद्यार्थी संघ नेतृत्व बिहिन अवस्थामा छ। अब नयाँ आउने नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समितिमा म सभापति भए भने अहिले गलत बाटोमा मोडिएको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सहि दिसा प्रदान गरेर शैक्षिक सुधारको प्रयासमा लाग्छु।
स्ववियु निर्वाचन नजिकै आएको छ, यसबाट नेविसंघ पन्छिन खोजेको आरोप पनि छ नि ?
नेपाल विद्यार्थी संघले रगत बगाएर स्थापित गरेको विद्यार्थी आन्दोलन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसँग हाम्रो अभिन्न साइनो छ। त्यसैले गर्दा पनि हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनबाट कहिल्यै पनि भाग्दैनौ। अर्को कुरा आफ्नो एकता प्रक्रिया नमिलेर अखिल र अखिल क्रान्तिकारी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा जाने पक्षमा छैनन्। आफू पन्छिन कम्युनिस्ट पार्टीका विद्यार्थी संगठनका साथीहरूले नेपाल विद्यार्थी संघलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको मिथ्या आरोप लगाएको हो। यो आरोप सरासर गलत छ। हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा जान तयार छौ।